Iphakheji Tracker: Buyekeza umlando wezinhlelo zokusebenza ezifakiwe | Izindaba zamagajethi
Iphakheji Tracker: Buka umlando wezinhlelo zokusebenza ze-Android ezifakwe esigungwini
Uma sinedivayisi ephathekayo enesistimu yokusebenza ye-Android ezandleni zethu, khona-ke ngokuqinisekile sizobe sifake inombolo enkulu yezicelo ezivela ku-Google Play Isitolo, ezimeni eziningi ebezingaba mahhala nezinye esikhundleni salokho zihlole isikhathi esithile; kuzoba nomzuzu lapho imemori yangaphakathi yesiginali igcwala khona, kudingekile ukuzama ukukhipha zonke lezo zinhlelo esingenayo intshisekelo yokuba nazo ngaleso sikhathi.
Ngokuhamba kwesikhathi, sizodinga ukwenza uhlobo oluthile lokusebenza ku-terminal, kufanele sisebenzise noma yiziphi izinhlelo zokusebenza ze-Android ebesingazifaka noma sizikhiphe komunye umzuzu othile. Yilapho leli thuluzi elibizwa ngokuthi "Iphakheji Tracker" liqala ukusebenza, ngoba, izosikhombisa wonke umlando wezinhlelo zokusebenza esizifakile esibulalayo, okuzosisiza ukukhumbula amagama abanye babo ukuyifuna futhi esitolo seGoogle.
Isicelo esiwusizo ekusetshenzisweni kwe- «Package Tracker»
Kufanele uye kusixhumanisi «Iphakheji Tracker»Ku-Google Play Isitolo ukuze ukwazi ukufaka leli thuluzi esigungwini. Uma usukwenzile futhi uqhubeka nokuwenza, uzothola i-interface lapho, kufanele chaza ubude besikhathi ukuze usesho lwazo zonke izinhlelo zokusebenza ze-Android ezifakiwe noma ezingafakwanga zivele kumlando omncane. Ukusuka lapho kuzofanele sibone kuphela labo abanesithonjana esiluhlaza noma esibomvu, esimele kuphela uma sikhona noma uma sesivele siyisusile ku-terminal.
Ukusebenza okusebenzayo kwaleli thuluzi sekuvele kushiwo ngenhla, noma singazama futhi ukusebenzisa i- "Package Tracker" ku- yazi ukuthi yiziphi izinhlelo zokusebenza ezifakwe umuntu ohlukile, uma i-terminal ibingekho ezandleni zethu ngenxa yemalimboleko eya kothile ngesikhathi esithile.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » I-Telephony » AmaSelula » Iphakheji Tracker: Buka umlando wezinhlelo zokusebenza ze-Android ezifakwe esigungwini
Ungayisika kanjani iSIM khadi ukuyenza ibe yi-micro-SIM
Sense, inkosi yamawashi we-alamu